Ny fiahiana sosialy dia antoky ny fampandrosoana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny fisian’ny fiahiana ara-tsosialy tsara lamina sy maty paika dia antoka mampitony ny sain’ny mpiasa ary mitombin-tsaina izy ireo manao ny asany. Izany hoe làlana tokana ahazoana vokatra tsara eo amin’ny sehatry ny asa ary miteraka fampandrosoana ho an’ny firenena. Rehefa voakarakara tsara ny mpiasa amin’ny fanomezana fiahiana sosialy ampy azy ireo amin’ny ara-pahasalamana dia manatsara ny vokatra entiny izy ireo. Laharam-pahamehana ho an’ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS), izay tarihin’ny Tale Jeneraly Arizaka Rabekoto Raoul ny fametrahana ho fiahiana ara-tsosialy mivelatra sy tsy miangatra ho an’ny malagasy tsy vaky volo.
Mamboly sy mandraharaha ara-barotra ny ankamaroan’ireo mponina ao amin’ny Kaomnina ambonivohitra Vavatenina izay any amin’ny 145 km avaratra andrefan’i Toamasina no misy azy. Maro ireo mpiasa no mbola tsy misitraka ny fiahiana sosialy. Ka hisarihana ny sain’ny mpandraharaha any antoerana, amin’ny maha zo fototra maha-olona izany fiahiana ara-tsosialy izany, ka dia nikarakara fiofana nandritra ny telo androny ny CNaPS. « Ny firenena no mandroso dia lahara-pahamehana ao aminy ny fiahiana ara-tsosialy. Noho izany indrindra no nanomezana fiofana fampahafatarana ny fiahiana ara-tsosialy izay zo fototra amin’ny maha-olombelona. Fampahafatarana ny mpanjifa ao anaty sehatry ny asa mba ts’isy ho very zo ny olona. Izao ihany koa no isarihana ny sain’ny rehetra ao anatin’ ny fandraharahana. Tanjonay ny fampahafantarana ny tolotra omen’ny CNaPS sy ny fanakaikezana ny mpanjifa», hoy i Rasoazanatsima Landisoa, talen’ny masoivoho CNaPS ao amin’ny faritra Analanjirofo, izay sady nisolo-tena ny tale Jeneraly, Arizaka Rabekoto Raoul, nandritra ny lanonam-panokafana.
Nahazo tombony tamin’ny fiofanana ireo ben’ny tanàna sy ny tompon’andraikitra avy amin’ny orinasam-panjakana izay mampiasa olona ECD, ary ireo solontenan’ny orinasa sy sarambabem-bahoaka tao Vavatenina. Randrianarijaona Charles Emilson, lehiben’ny sampandraharana miahy ny ara-pahasalaman’ny mpiasa sy ny sosialy (service d’actions sanitaires et sociales) SASS, no nitarika ny fiofanana.
Nampianarina ny mpiofana nandritra ny telo andro ny lalàna mifehy ny asa sy ny zon’ny mpiasa, ny fomba fanaovana fiofanana arak’asa, ny fomba idirana ho mpikambana ary ny fepetra rehetra ahazoana ny tombotsoa izay atolotry ny CNaPS ny mpanjifa azy ireo. « Tsy ny fisotron-dronono ihany araka ny ahafantarantsika azy foana fa maro ny fanampiana entin’ny CNaPS ho an’ny mpiasa, toy ny volan’ ny bevohoka, ny solo-takaitra azo avy amin’ny loza amperinasa, hatramin’ny fisotroan-dronono. Maro ny fahalalana azo mandritra fiofanana toy ny lalàna mifehy ny asa sy ny zon’ny mpiasa », hoy Rahasoanantenaina Ernestine secrétaire comptable avy amin’ny Centre de service agricole (CSA) Mamilango Vavateninana. Nambaran’i Flavien Jean de Dieu, mpanentana amin’ny Radio Relax Vavatenina kosa fa : « Matahotra sy miferinaina ihany ny mpiasa mitaky ny zony noho ny fatahorana ny mpampiasa sao dia ho very asa. Nampahafantarin’ny CNaPS anefa fa dia tazomina ao anaty tsiambaratelo avokoa ny resaka ataon’ny CNaPS amin’ny mpiasa rehetra izay manantona azy».
Nanotrona ny atrikasa fiofanana nokarakarain’ny Tahirim-pirenena tany Vavatenina ireo olom-manan-kaja ka nisolotena ny sefo distrika ny lefiny Maheva Crepin izay nilaza fa : « Mbola maro tokoa ny mpiasa no very zo sy tsy misitraka ny valin-kasasarany rehefa antitra ka andraikitry ny olom-panjakana rehetra no mandray andraikitra manao ny fanaraha-maso mba ho fiarovana ny vahoaka amin’ny sehon-javatra toa izany ».